I-UN manifesto '90 ibonisa: Iindlela zemozulu ezaqokelelwa ukufezekisa urhulumente wehlabathi: Martin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Novemba 2019	• 5 Comments
Kwiminyaka '90 epapashiweyo nobhala jikelele ye-UN, uRobert Muller, imanifesto apho athi khona kufanele ukuba kubekho urhulumente wehlabathi. Olo lawulo lwehlabathi kufuneka luphunyezwe ngombono "wokukhusela umhlaba" ngolwazi lwendalo njengeyona nto ibalulekileyo. Kwelo manifesto kuyacaciswa ukuba uluntu ngokubanzi lunokuqiniseka njani ukuba lwamkele urhulumente wehlabathi ngokutyala ukoyikwa kwe-apocalypse yendalo. Uluntu ngokubanzi kufuneka ludlalwe ngombono wokuba uluntu luyazitshabalalisa.
Kwinqaku elinomxholo othi "Urhulumente oMhlaba oLungileyo: Isakhelo kunye neendlela zokwenza," URobert Muller ucacisa indlela umbono ovunyiweyo weenguqu zemozulu onokusetyenziselwa ukukholisa abantu "ngemfuneko" yorhulumente wehlabathi. Ukongeza, uthetha kwisicwangciso malunga nokuqaliswa 'kwenkolo yehlabathi elitsha' kunye 'nokuncitshiswa kwabemi'. I-Publicist Brandon Smith ibonisa konke oku ngokweenkcukacha eli nqaku.
Kubalulekile ukuba uyamkele inkqubo yokwakha uphawu ukusuka ekhohlo kuthelekiswa nelungelo kwezopolitiko. Leyo yinto eyenzekayo kulo lonke elaseYurophu naseMelika. Isobunxele libonakala lifumana yonke into enento yokwenza nokuchazwe ngaphambili kwi-ajenda ye-UN nokuba into ebisoloko 'ilungile' okanye 'yenkululeko' kumaqela ezopolitiko zase-Datshi sele ishiywe ngokupheleleyo. Eli lungelo litsha ligcweleziswe nguThierry Baudet noGeert Wilders. Awusayiva iBaudet kwimidiya, kuba eli lungelo litsha lalitsala iivoti ezininzi kakhulu, ke loo nto kwafuneka icothwe ngononophelo (apho udlame embuthweni luhlala lusebenza kakuhle). Kwaye uTierry uyazi ukuba ungupopu wamandla (ofundiswe yintsapho yasebukhosini iClingendael Institute) kwaye ke uzigcina ethe cwaka ngakumbi kamva.
Ngayiphi na imeko, kucacile ukuba i-apocalypse yendalo yakhulelwa kwiminyaka ye-90. Ngokwenene siskripthi esicacileyo. Oko kuthetha ukuba ukusuka ku-A ukuya ku-Z kwenziwa ukuba kukhuthazwe abantu kwaye batyhalele i-ajenda. Leyo ajenda izaliswe ngabadlali abaziingcali (ababizwa ngokuba ngabezopolitiko) amakhonkco amatsha: UMark Rutte & Co. Lo mgaqo-nkqubo ngoku unyanzelwa yimithetho yongxamiseko esekwe kwezi zinto zibunjiweyo kwindalo esingqongileyo.
Sisenokholo olukhulu kakhulu kubunyani bezopolitiko. Into yokuba abantu abanjengoMartin Vrijland babize abezopolitiko ukuba babe ngabadlali, kukuba kokona kuphakamisa ingcinga yakho kunye nokucaphukisa kunye namanenekazi e-Hague, kodwa oko akuthethi ukuba kuya kufuneka sikuthathe okoqobo. Bangabadlali abakhethiweyo, abagadwe kwaye baqeqeshwa yintsapho yasebukhosini kwasebusaneni, ukugcwalisa ubuqhetseba wentando yesininzi ngayo yonke incasa kunye nevumba elifumaneka kuluntu. Imithombo yeendaba ngabathengisi bayo kwaye bancede ukuyila kunye nokuxhasa ukukhohlisa kwezinto ezibonakalayo eziphikisanayo. Ukuba ufuna ukunika abantu ingcinga yokuba kukho into eza kugutyungelwa ngobisi, ke kufuneka ukwazi ukubamba zonke izimvo ezinokubakho kumaqela ezopolitiko emva koko ubavote, ngethemba lokuba kuya kubakho imigaqo-nkqubo elunge kubo. Okanye ngaba kuqala ujike amashumi asibhozo kwaye uhambe emva komhambi ukuze ubone ukuba idemokhrasi ibuxoki? Bungakanani ubuxoki obuseza kudalulwa ukuze babone ikhabhathi ibile kwaye ibiwe kwaye ityhalele phambili kwii-ajenda ezinika umbono wokuba ulilungele ilizwe, kodwa ukukhusela iklabhu ye-elitist kunye nokugqithisa nokucinezela abantu?
In incwadi yam entsha Ndicacisa indlela iihres ezihamba ngayo kwaye ndicacisa ukuba kutheni le nkolo intsha yehlabathi kufuneka ifike njani kwaye ihambelana njani neendaba zangoku ze-transgender (kunye nomnyama). Kungoko kucace mhlophe ukuba yonke le nto ilawulwa kwinqanaba le-UN kwaye ke inokuqikelelwa ukuba loo ngqwalaselo inyanyekayo ye-Greta Thunberg kunye ne-Extinction Rebellion ivela ngequbuliso. Kwakhona: icwangcisiwe kwaye yayikwimizobo ye-UN kwiminyaka ye-90. Ke kuyindlela yokuya kwi-ajenda kwaye ukuba kukho i-ajenda kwenye indawo, imali eninzi ifakwe kumatshini wokusasaza kwaye abantu abaninzi bayathengwa ukuze batyhalele i-ajenda kuzo zonke iinkalo zoluntu.
Icebo ngoku kukunika yonke into enxulumene ne-ajenda ye-UN, uphawu 'olushiyekileyo' nayo yonke into eboniswa yile ajenda ukunika uphawu 'lwasekunene'. Obuqili buqili kukunxibelelanisa uphawu ekunene kwezopolitiko (abadlali abakwinkqubo yolawulo) abanjengoDonald Trump, Boris Johnson, Nigel Farage, Thierry Baudet, njl njl. Ngokuvusa uqoqosho kunye nokudala iziphithiphithi ezinkulu zentlalo, unokujongana nayo yonke into enxulunyaniswa nophawu 'olulungileyo'. Ngamafutshane, ujongana nazo zonke iintlobo zesizathu kunye nazo zonke iindlela zohlalutyo, kunye nezizathu ezigxekayo zokugxeka. Oko kubeka isiseko sokulawulwa kwamapolisa ekhokelwa lihlabathi kunye nokungeniswa kwamapolisa okucinga.
Kucetyiswa ukuba ndiyisasaze incwadi yam, kuba ubalo kumajelo asekuhlaleni sele lukhulu kangangokuba lo myalezo ubalulekileyo awunakufikelela ebantwini. Ngapha koko, loo ngcinga yamapolisa sele ethatha imilo, phantsi kwephiko elinye 'lokhuseleko' (ukhuseleko kwiindaba ezingezizo okanye imibono egqithisileyo). Usengakhupha yonke into ephepheni. Incwadi ibonelela ngesishwankathelo esicacileyo sayo yonke imiqolo yenkohliso nenkohliso kwaye ikwabonisa indlela inkqubo entsha yolawulo lwehlabathi enokuthi ityhileke ngayo kwinqanaba le-DNA nangokunxibelelana kwengqondo nekhompyuter. Incwadi ayisiyo ikopi yeencwadi zikaDavid Icke kwaye ayinanto yakwenza nomhlaba omdaka okanye izinto ezihubhayo. Incwadi iyenza, nangona kunjalo, inike isishwankathelo esibalulekileyo sendlela iinkqubo zokucwangcisa zakhiwe ngayo kunye nokuba zinokuqondwa njani. Kuba le ncwadi inokufundwa ngosuku olunye kwaye iza nesisombululo sekhonkrithi, kulula kakhulu ukusasaza kusapho nakwabahlobo. Lixesha lokuba sithathe inyathelo kwaye lilixesha lokukhuthaza incwadi. Uyawuxhasa nomsebenzi wam ngokuthengwa kwencwadi.
Uludwe lwekhonkco lovimba: alt-market.com
tags: imarike ye-alt, brandon, com, eziziimbalasane, amakhonkco, Bo nakala, uphawu, phakathi, I-apocalypse yokusingqongileyo ye-UN, kunene, URobert Muller, Rutte, Smith
18 Novemba 2019 kwi-11: 28
Inqaku elikhulu kwakhona .. Ngokwenene sonke singabadlali ngegama lesibongo sethu .. Kodwa la ecaleni.
Sithenge nje incwadi yakho ukuze umama kunye namanye amalungu osapho (abasavumelaniyo) bangathemba baphume kwimeko yabo yokungakhathali ..; )
18 Novemba 2019 kwi-12: 14
Kwi-'60 'yayisele icace gca kwiKlabhu yaseRome (iRockefeller, iKissinger, eyomeleleyo njlnjl.) Ukuba babezosebenzisa imozulu ukugqiba abantu. Kwaye oko kubandakanya ubunjineli boGeo ...
UDavid Rockefeller wayekho noStrong eColorado e-1987 ye "Ngqungquthela yesiBini yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi," intlanganiso yokubaluleka kwembali yehlabathi jikelele ekungekho namnye wakha wayiva ngaye. Ukuzimase ukuthandwa kukaRockefeller, uStrongfeller, uSomandla, uJames Baker kunye no-Edmund de Rothschild ngokwakhe, le nkomfa iphele ijikeleze umbuzo wokuxhasa ngezimali intshukumo yokusingqongileyo eyayiqanjwe nguStrong emhlabeni ukusuka emsebenzini wakhe kwiNkqubo yeNdalo yeZizwe eziManyeneyo.
Kwakule nkomfa (ukurekhodwa okukhoyo kwi-intanethi kubulela umpempe uGeorge Hunt) ukuba uRothschild wacela iBhanki yoLondolozo lweHlabathi, awayibona njengendlela yokuxhasa ngemali "isiCwangciso seMarshall sesibini" esiya kuthi sisetyenziselwe ityala lesithathu " Ukukhululeka ”kunye nokuyithanda kakhulu inja yehlabathi jikelele ikhwaza" ukukhula okuzinzileyo. "
Umongameli wase-US uGeorge Bush uthetha ngephupha le-1Rothschild lazaliseka xa uSomandla wongamela enye ingqungquthela ekumgangatho ophezulu ye-UN: i1992 Rio "Ingqungquthela yoMhlaba." Ingqungquthela yoMhlaba eyavumela iBhanki yoLondolozo lweHlabathi ukuba yenzeke.
28 Novemba 2019 kwi-17: 01
28 Novemba 2019 kwi-19: 37
Ukudalwa okubalaseleyo kwe-ajenda nokuba kwi-1992! Ukujonga kwe-1.067 okoko i-2012 ixelela, ndikhuphele ividiyo. Enkosi!
18 Novemba 2019 kwi-20: 09
"Ukuba ufuna ukunika abantu umbono wokuba kukho into eza kutyunyuzwa ubisi, kuya kufuneka ubenakho ukufaka zonke izimvo kumaqela ezopolitiko emva koko ubavote, ngethemba lokuba kuya kubakho imigaqo-nkqubo elungileyo kubo. "
« Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni
Utatomkhulu ka-Greta Thunberg uye wavela waba ngumvelisi wegalelo lokugcina ukushisa kunye nokuncitshiswa kwenani labantu kwi-eugenics »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.836.603
Ibhayibhile sele yenziwe ukuba kungathathelwa ngocalucalulo ngokwesini, kodwa umsebenzi uyenziwa kwi-Quran engathathi hlangothi
UMartin Vrijland op Ibhayibhile sele yenziwe ukuba kungathathelwa ngocalucalulo ngokwesini, kodwa umsebenzi uyenziwa kwi-Quran engathathi hlangothi